Marketing Assistant Manager | Ve Ve Soft Drinks Factory ﻿
18.2.2020, Full time , FMCG
-Marketing Plan များကို Monthly, Quarterly Yearly Plan များရေးဆွဲနိုင်ရမည်။
-Company ၏ Events ပွဲများ ကုန်သည်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
-Myanmar Festival ပွဲတော်များတွင် Brand Promotion ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။
-Sale Promotion Plan, Project Management Plan ,Brand Promote Plan, Marketing Budget planများရေးဆွဲနိုင်ရမည်။
-New Products အတွက် Label Design , Slogans and Ingredients များအတွက် Products Information များကို တွေခေါ်ရေးသားနိုင်၇မည်။
-Report ကောင်းစွာ ပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
-မိမိ၏ team အား အစဉ်အမြဲတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပေးရမည်။
-လက်အောင်ဝန်ထမ်းများကိုကောင်းစွာ အုပ်ချုပ်နိုင်ပြီး Customer များနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
- သက်ဆိုင်ရာ Sales & Marketing အပိုင်းများ အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်တစား ဆောင်ရွက်လိုသူဖြစ်ရမည်။
-Marketing နှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရှိရမည်။
- အသက် (30-နှစ် အထက်)
- FMCG နှင့်ပတ်သက်သော Marketing လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်အထက်ရှိရမည်။
-Microsoft word,excel,power point, internet & e-mail အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
- ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး၊ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်၊စကားပြောချိုသာ၍ သွက်လက်ရမည်။
- ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
* အထက်ပါရာထူးအတွက် ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရန်၊ နယ်ခရီးသွားနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
We offer -Attractive Salary
-Sun and gazetted holiday off
-Monday to Saturday (9 AM to 5:30PM)
-ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရမည်။ -Operation Manager အား Assit လုပ်ပေးရမည်။ -project ကိစ္စရပ်များကူညီဆောင်ရွက်ရမည်။ -နိုင်ငံ ခြားသားများ၏ Visa ကိစ္စရပ်များပြုလုပ်ရမည်။ -
-As you know HR manager JD.
Assistant Manager(B2B) F (2 posts)
1.	Cooperate with distribution/marketing team. 2.	Develop new corporate customer and search for new opportunity, prospect and potential customer. 3.	Help customer settle issue and develop customer relationship . 4.	Reporting to HOD for daily sales call. 5.	Developagrowth strategy focused both on financial gain and customer satisfaction Organization. 6.	Promote the company’s products/services addressing or predicting clients’ objectives . 7.	Build long-term relationships with new and existing customers.
5 Days, Full time , 300 000 , FMCG
•	Translate Chinese to Myanmar and Myanmar to Chinese. •	Chines good speaking, writing and listening skills are needed to communicate in our industry with well understanding of its usage. •	Report to Maintenance Manager. •	Manage work schedules to meet deadlines.
-ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရမည်။ -Manager အား Assit လုပ်ပေးရမည်။ -FDA နှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များဆောင်၇ွက်မည်။ -Event ပွဲများ ရှိပါက ပွဲနှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းကိစ္စရပ်များ၊စာရင်းဇယားမျာ� ...
-Marketing Plan များကို Monthly, Quarterly Yearly Plan များရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ -Company ၏ Events ပွဲများ ကုန်သည်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ -Myanmar Festival ပွဲတော်များတွင် Brand Promotion ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ -Sale Promotion Plan, Project Management Plan ,Brand Promote Plan, ...
လက်ထောက်မော်တော်ယာဉ်မှူး M (1post)
-မော်တော်ယာဉ်ဌာန၏ယာဉ်စာရင်းများအား up to date ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ -မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုမှု စာရင်းများကို တိကျစွာ စာရင်းပြုစုရမည်။ -မော်တော်ယာဉ်ဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ စည်းကမ်းပိုင်းများအား ကြီးကြပ်ရမည်။ -မေ ...
FMCG jobs FMCG jobs Marketing Jobs in Myanmar, jobs in Yangon